Muzaa Akko - Contes pour le français langue seconde
Muzaa Akko Les bananes de grand-mère
Oddoon akko dansaa dha. Mashiilaa, kaazzava fi boqqollo ofirra qaba. keesaa bayee dansaa kanture muzaa. Akkoo akakile bayee qaabatulle ana akka sirritti najalatu nanbeeka. Ana yeroo bayee gara mana isheeti naaferiti. Icciti xinnos natti himitee jirti. Iciittin tokko garu nijira kan isheen natti hinhimini. innis;” Muzaa akka issa argatudha.”
Gaftokko kircaata gudda tokko mana akko kiyya duratin arge. Yeroon fayidaa isaa gafadhu, deebiin isheedha; “Kircaata falfalati,” nanajette. Kircaata sanati anna balaa muzaa bayee tu ture. Waansa baruun barbadee, “Akko balli kun malsigodhaa?” jedheen gafadhe. Deebin ani argadhe: “Isaan kun balaa falfalati.”
Akko, muzaa, bala muzaa, fi Kircaata magraa ilaalu bayee gemechisaadha. Garu akkon wabalesse jennan gara harmee koti na’ergite.” Akko me yeroo ati qophesitu ya ilaalu....” “Dubbi namani sinjedhu dhagahi akkan ani sinjedhe godhi” Jete didde akkon. Anis figeen demee.
Yeroon debi’uu akkon ala qofaa ishee techi. “Akko kircaani esssa, muzuni ho?” Deebin ishee garu, “Hundi isani lafa falfala kiyya jiran.” Bayee nama aarsa.
Guyyaa lama booda akkon ulee ishee mana cisiicha isheeti akkan fidhuf nagafate. Akkuman mana seenen foliin muzaa bilchaata na hawwate. Gara boroo kessa immo Kircaani marga akko kootii nimuldhata. Uffata halkani duloomadha maramee jira. Olkaseen folii hawwataa sana dhamdhamee.
Sagaleen akko kiyya nanaasise yeroo isheen “Mala gootaa,” nanajete. “Dafi ulee sana nafidi,” nanjete. Anis dafeen ulee ishee fidef. “Maf kolfitaa” jette nagafate. Gaffin ishee akkan wa’ee falfal ishee kananti akkan kolfuu nayadachisee.
Guyyaa itti aanu yeroo akko harmee koo ilaalu dhufte, gara mana ishee figeen akka muzaan suni bilchatee ilaale. Muzaan bilchaate bayeen argee. Tokko fundheen wandaboo ko kessa kayyadhe. Eegan Kircaata uffisee gara alaa baheen muzaa nyaadhe. Bayee mi’aawaa ture.
Guyyaa itti aanu yeroo akkoon oddo kessa hojjattu, ani suuts jedheen, muzaa fudheen quchisee. Hundi isaanitu bilchataniru. Afaraan isaani fudheen sokkee. Suuta jedhe gara balbalaa deemurree sagalee akko nanadhagah ture. Akkuma ta’eeti muzaa dhoksee gara allati gadi bahee.
Guyyaan itti aanu guyyaa gaba’a ture. Akkon ganamaan kaate. Yeroo hundaa muzaa nilchaatafi Kazava gara gabbati kessitee gurgurti. Guyyaa sana ishee argudhaf hinmuddamne. Garu ishee malee yeroo bayee jirachu hindanda’u.
Galgaltu guyyaa sana abbaa, harmee kotifi akko kotinin wamame. Malif akka ta’e bareen ture. Galgala sana yeroon rafu lammata akkan waantokko illee hinhanne bareen nama tokko irrayu.
Ayyaana akko wajjiin Gadoo Dammaqajelchitu Waan Vusi waa’ee obboloetti ishe jette